ကနျြးမာရေး: ညစ်ညမ်းတဲ့ supernormal လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ပါတယ် | ဖောင်ဒေးရှင်းကဆုချ
ပင်မစာမျက်နှာ ကျန်းမာရေး တစ်ဦးက Supernormal stimulus
ဤအပိုင်းကိုဂယ်ရီ Wilson ကရဲ့စာအုပ်ကနေကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူအပေါ်အခြေခံသည် Porn, အင်တာနက် Porn နှင့်စွဲမှု၏ & Emerging သိပ္ပံပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက် အာဘော်၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်။
တစ်ဦး supernormal နှိုးဆွကဘာလဲ?
စကားလုံးများ၊ ရုပ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများသည်ကြာမြင့်စွာကတည်းကရှိနေခဲ့ပြီး ၀ တ္ထုများမှအာရုံကြောဓာတုဗေဒဆိုင်ရာအလျင်အမြန်ထွက်ပေါ်လာသည်။ ဒီတော့ဒီနေ့ဘာကြောင့် porn ကိုထူးခြားတဲ့ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်စေတာလဲ။ မရ၎င်း၏အဆုံးမဲ့အသစ်အဆန်း။ Dopamine သည်အခြားစိတ်ခံစားမှုများနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများကိုလောင်ကျွမ်းစေပြီး၎င်းတို့အားလုံးသည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်မကြာခဏထင်ရှားသည်။
•အံ့အားသင့်စရာ၊ ထိတ်လန့်ခြင်း (ဒီနေ့ညစ်ညမ်းမှုမှာဘာတွေထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာမရှိဘူးလဲ)
•ရှာခြင်းနှင့်ရှာဖွေခြင်း (လိုသော, ထားချက်အရ)
တကယ်တော့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသည်သိပ္ပံပညာရှင်များအားပုံမှန်မဟုတ်သောလှုံ့ဆော်မှုဟုခေါ်သည့်အရာနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကနိုဘယ်ဆုရနီကာလပ်စ်တီဘာဂင်ကငှက်များ၊ လိပ်ပြာများနှင့်အခြားတိရိစ္ဆာန်များသည်ကြက်ဥနှင့်မိတ်ဖက်အတုများကိုပိုမိုနှစ်သက်သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ငှက်မများသည် Tinbergen ၏ဘ ၀ ထက်ပိုမိုကြီးမားသော၊ ပိုမိုထင်ရှားသည့်အစက်အပြောက်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောအင်္ဂတေဥများကိုထိုင်ရန်ရုန်းကန်ခဲ့ရသည်။ ရတနာပိုးတောင်မာများသည်ဘီယာပုလင်းအညွန့်များနှင့်ပေါင်းစပ်ရန်အချည်းနှီးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများအတွက်တကယ့်အိမ်ထောင်ဖက်များကိုလျစ်လျူရှုပါလိမ့်မည်။ မြေကြီးပေါ်ရှိဘီယာပုလင်းတစ်လုံးသည်သူတွေ့ဖူးသမျှတွင်အကြီးဆုံး၊ အလှဆုံး၊ လိင်အကြိုက်ဆုံးအမျိုးသမီးဖြစ်သည်။
တစ်နည်းဆိုရသော်တိရိစ္ဆာန်မိတ်လိုက်ခြင်းဂိမ်းကိုဆွဲဆောင်။ မရသော 'ချိုသောနေရာ' တွင်အလိုလိုတုန့်ပြန်မှုအစားရပ်တန့်သွားမည့်အစား၊ ဤပင်ကိုပရိုဂရမ်းမင်းသည်လက်တွေ့မကျသည့်၊
Tinbergen သည်ထိုကဲ့သို့သောလှည့်စားခြင်းကို 'supranormal stimuli' ဟုခေါ်ခဲ့သည်။
Supernormal လှုံ့ဆော်မှုများမှာကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံမှန်မဟုတ်သောလှုံ့ဆော်မှုများ၏ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းများဖြစ်သည်။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်မှာ၊ မျောက်တစ်ကောင်သည်စစ်မှန်သောအိမ်ထောင်ဖက်များထက်ပုံရိပ်များကိုရွေးချယ်ရန်မဖြစ်နိုင်သော်လည်းမျောက်ငယ်များ၏ပုံများကိုကြည့်ရှုရန်မျောက်များသည် 'ဖျော်ဖြေမှု' ကိုပေးလိမ့်မည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါ၊
ဘယ်လိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းတဲ့ supernormal လှုံ့ဆော်မှုပါသလဲ
သဘာဝလွန်လှုံ့ဆော်မှုအတုကိုကျွန်ုပ်တို့ ဦး စားပေးလုပ်သောအခါ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်၏ဆုိုင်ရာပတ် ၀ န်းကျင်အတွင်းရှိ dopamine ပေါက်ကွဲမှုကို၎င်း၏သဘာဝအဆွေတော်ထက်ပိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူအများစုအတွက်လွန်ခဲ့သောနှစ်၏ porn မဂ္ဂဇင်းများသည်စစ်မှန်သောမိတ်ဖက်များနှင့်မယှဉ်နိုင်ပါ။ Playboy centrefold သည်အစောပိုင်းကညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများသည်အစစ်အမှန်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောမိတ်ဖက်များနှင့်ဆက်စပ်ရန်သင်ယူခဲ့ဖူးသောအခြားအချက်များကိုပုံတူပွားခြင်းမပြုလုပ်ခဲ့ပါ - မျက်လုံးချင်း၊ ထိတွေ့မှု၊ ရနံ့၊ ပရောပရည်ခြင်း၊ ကခုန်ခြင်း၊
သို့သော်ယနေ့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသည်ပုံမှန်မဟုတ်သောလှုံ့ဆော်မှုများဖြင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ ပထမ ဦး စွာ၎င်းသည်ကလစ်တစ်ချက်တည်း၌ရရှိနိုင်သည့်အဆုံးမဲ့ဝတ္ထုများကိုထုတ်လုပ်ပေးသည်။ စိတ် ၀ င်စားမှုတိုးပွားစေရန်နှင့် ဦး နှောက်၏ဆုိုင်ရာအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်အတွက်ဆုနှင့်အသစ်အဆန်းကိုမျှော်လင့်ခြင်းကတစ် ဦး ကိုတစ် ဦး ပိုမိုအားကောင်းစေသည်ဟုသုတေသနကအတည်ပြုသည်။
ဒုတိယအချက်မှာအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမရေမတွက်နိုင်တဲ့သူတွေဟာတိုးမြှင့်ရင်သားကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့် Viagra gargantuan penises, အလိုဆန္ဒ, ပုံ-မောင်းနှင်တွန်းနှစ်ချက်သို့မဟုတ်သုံးဆထိုးဖောက်မှု, အုပ်စုလိုက် Bang နှင့်အခြားလက်တွေ့အခြေအနေတွေ၏ပုံကြီးချဲ့က်မြည်သံမျိုးနဲ့ထောကျ။
တတိယအချက်အနေနှင့်လူအများစုအတွက်ရုပ်ပုံများသည်ယနေ့ပြင်းထန်သောလိင်မှုကျူးလွန်သူများ၏ hi-definition ၃ မိနစ်ဗီဒီယိုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်။ မရပါ။ သင်၌ရှိသောအဝတ်အချည်းစည်းရှိသတ္တဝါကလေးများသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးဖြစ်သည်။ အင်တာနက်မတိုင်မီ ၁၃ နှစ်အရွယ်၌ဖြစ်ပျက်လာမည့်အရာသည်နောက်ဖြစ်ပျက်မည့်အရာကိုသင်အမြဲတမ်းသိခဲ့သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် 'ကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ခဲ့သည့်အရာကိုကျွန်ုပ်မယုံနိုင်အောင်' မရေမတွက်နိုင်သောဗွီဒီယိုများနှင့်သင်၏မျှော်လင့်ချက်များကိုအဆက်မပြတ်ချိုးဖောက်နေသည် (ဦး နှောက်သည်ပိုမိုလှုံ့ဆော်မှုခံရသည်) ။ လူတွေကိုအခြားအရာတွေလုပ်နေတာတွေကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်လူတွေကသင်ယူဖို့ဆင့်ကဲပြောင်းလဲလာတာကိုသတိရပါ၊ ဒါကြောင့်ဗီဒီယိုတွေဟာတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်တွေထက်သင်ခန်းစာတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာပိုအားကောင်းလာတယ်။
Tinbergen က 'ငါပြောခဲ့တာပါ' လို့ပြောစေမယ့်သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့ထူးဆန်းဆန်းပြားမှုတွေကြောင့်ဒီနေ့ညစ်ညမ်းတဲ့သုံးစွဲသူတွေဟာအင်တာနက် Erotica ဟာတကယ့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေထက်ပိုပြီးလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေလေ့ရှိတယ်။ အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်ကွန်ပြူတာရှေ့တွင်ညစ်ညမ်းမှုကိုကြည့်ပြီးရုပ်ပုံအသစ်များကို နှိပ်၍ နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်နာရီပေါင်းများစွာမကြာချင်ပါ။ သူငယ်ချင်းများနှင့်ပေါင်းသင်းခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းကိုသူတို့ပိုမိုနှစ်သက်ကြသည်။
သို့သော်အမှန်တရားသည် ဦး နှောက်၏တုန့်ပြန်မှုအဆင့်တွင်ယှဉ်ပြိုင်ရန်ရုန်းကန်နေရသည်။ နော Church ဘုရားကျောင်းကသူ၏စာအုပ် 'ထဲတွင်ထည့်သည် Wack: အင်တာနက်က Porn မှစွဲညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေထက်ကြည့်ရှုရန်ကြိုးစားခြင်းသည် ပို၍ ခက်ခဲပြီးရှုပ်ထွေးစေသည်။ ' ဤအရာသည်ပထမလူ၏အကောင့်များစွာတွင်ပဲ့တင်သံကိုတွေ့ရှိနိုင်သည်။
"ငါသည်အလွန်နည်းပါးချိန်းတွေ့အခွင့်အလမ်းများရှိကြ၏ဘယ်မှာငယ်လေးတစ်မြို့မှာဖမ်း, တစ်ခုတည်းဖြစ်ခြင်း၏ကာလကတဆင့် ဝင်. , ငါ porn နှင့်အတူမကြာခဏ masturbate မှစတင်ခဲ့သည်။ ငါအတွက်စို့တယ်ဘယ်လောက်လျင်မြန်စွာမှာအံ့သြခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ့်အလုပ်ကို surfing porn sites များ၏ရက်ပေါင်းဆုံးရှုံးစတင်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်းငါအပြည့်အဝငါအမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်အတူအိပ်ရာ၌ရှိ၏နှင့်ဟုန်းဟုန်းခက်ရနိုင်ရန်အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် porn ပုံရိပ်ကိုမှတ်မိဖို့ကြိုးစားနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖမ်းမိခင်အထိငါ့ထံသို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရာတန်ဖိုးထားခဲ့ပါဘူး။ ငါကငါ့ထံသို့ဖြစ်ပျက်နိုင်တယ်လို့စိတ်ကူးခဲ့ပါဘူး။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ငါသည်အညစ်ညမ်းမတိုင်မီကျန်းမာလိင်၏ရှည်လျားသောအခြေခံအုတ်မြစ်ခဲ့ငါသွားခဲ့ရာအသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်။ ငါဆေးလိပ်ဖြတ်ပြီးနောက်တဖန်ငါအလောင်းတော်ထားတဲ့စတင်များနှင့်မကြာခဏ။ နှင့်မကြာမီပြုလုပ်ပြီးနောက်ငါသည်ငါ၏မယားကိုတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ "
ဘယ်လို Porn စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Supernormal လှုံ့ဆော်မှုယူအမြတ်ထုတ်
ဤသည်နေ့ရက်ကာလ၌, supernormal ဆွ၏အဆုံးအဘယ်သူမျှမရှိပါတယ်။ ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုကိုတုပရန် porn သို့မဟုတ်အခြားကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူများနှင့်ထပ်တူပြုထားသော 3-D porn နှင့်စက်ရုပ်များနှင့်လိင်ကစားစရာများကိုပေးထားသည်။ ဒါပေမယ့်အန္တရာယ်တစ်ခုခုရှိနေရင်
•တွန်းလှန် (High-ကယ်လိုရီအစားအစာ, လိင်စိတ်နိုးထ) ကိုရှာဖွေပြောင်းလဲသောငါတို့ဘိုးဘေးဘီဘင် (နှင့်ကျွန်တော်) တစ်ဦးအရာတစ်ခု, ထိုဖြစ်ပါသည်, အထူးသဖြင့် '' အဖိုးတန် '' ပုံကြီးချဲ့ဗားရှင်းအဖြစ်မှတ်ပုံတင်,
• (သဘာဝတှငျတှေ့မပါ) အဆမဲ့ထောက်ပံ့ရေးအတွက်အဆင်ပြေမရရှိနိုင်ပါသည်,
•အမျိုးပေါင်း (အပေါများအသစ်အဆန်း) ၏စာရေးလာ,
•ကျနော်တို့နာတာရှည်က overconsume ။
စျေးပေါ, ဝပြောသော junk အစားအစာဒီ model ကိုက်ညီနှင့်တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာတစ် supernormal လှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုသည်။ သငျသညျအများကြီးအတွေးမပါဘဲတစ်ဦး 32-အောင်စအချိုရည်နှင့်အငန် nibbles တစ်အိတ်ချရှုံ့ချပေမယ့်ကိုယ့်အခြောက်အမဲသားနှင့်ပြုတ်အမြစ်များမှာသူတို့ရဲ့ကယ်လိုရီနှင့်ညီမျှလောင်ဖို့ကြိုးစားနိုငျပါသညျ!
အလားတူစွာ၊ ကြည့်ရှုသူများသည်မှန်သောဗီဒီယိုကိုရှာဖွေရန်အတွက်ဗွီဒီယိုများ၏ပြခန်းများသို့နာရီပေါင်းများစွာလှည့်လည်ကြည့်ရှုပြီး dopamine ကိုပုံမှန်မဟုတ်စွာရှည်လျားစွာမြင့်တက်စေခဲ့သည်။ သို့သော်မုဆိုးစုဆောင်းသူတစ် ဦး သည်နာရီပေါင်းများစွာအတူတကွဂူနံရံတွင်တူညီသောတုတ်ချောင်းဖြင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုအချိန်ဖြုန်းနေသည်ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး
Porn သည်ပုံမှန်မဟုတ်သောလှုံ့ဆော်မှုထက် ကျော်လွန်၍ ထူးခြားသောအန္တရာယ်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ပထမ ဦး စွာကြည့်ရှုရန်လွယ်ကူသည်၊ ၂၄/၇ ရနိုင်သည်၊ အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ဒုတိယအချက်အနေနှင့်အသုံးပြုသူအများစုသည်အပျိုဖော်ဝင်ခြင်းဖြင့်ညစ်ညမ်းခြင်းကိုစတင်ကြည့်ရှုကြသည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်အစားအစာစားသုံးမှုကိုကန့်သတ်ထားသည်။ အစာအိမ်စွမ်းရည်နှင့်သဘာဝမကျေနပ်မှုတစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်စုံတစ်ခုကို ထပ်၍ မတွေ့ကြုံနိုင်သည့်အချိန်တွင်စတင်ဖြစ်ပေါ်သည်။
ဆနျ့ကငျြ, အိပ်ပျော်ခြင်းနှင့်ရေချိုးခန်းအားလပ်ချိန်ရှိဘို့လိုအပ်ကြောင်းထက်အခြားအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအပေါ်မျှရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကန့်သတ်, ရှိပါတယ်။ အသုံးပြုသူတစ်ဦး satiation ၏ခံစားချက်များကိုထွက်လာပါတယ်မပါဘဲနာရီ porn, ဒါမှမဟုတ်ခြင်းကိုမနှစ်သက်မှ (climaxing မပါဘဲ masturbate) Edge နိုင်ပါတယ်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းနှစ်သက်သောစိတ်သည်ခံစားမိသော်လည်း dopamine ၏သတင်းစကားသည် 'စိတ်ကျေနပ်မှု' မဟုတ်ကြောင်းသတိရပါ။ “ ဆက်လုပ်ပါ၊ ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုရတော့မယ့်အချိန်” ပါ။
"ငါသည်ထို့နောက်ရပ်တန့် porn ကိုကြည့်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အလတ်စားအဆင့်ဆင့်မှာနေဖို့, အစဉ်မပြတ် edging orgasm မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုအနီးကပ်ကိုနှိုးဆှလိမ့်မယ်။ ငါ orgasm မှရတဲ့ထက် porn ကိုကြည့်တွေနဲ့ပိုပြီးစိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့သည်။ porn နောက်ဆုံးမှာကိုယ့်ကုန်များနှင့်လက်နက်ချထဲက orgasmed ခဲ့သည်သည်အထိငါ့ကိုအာရုံထဲမှာသော့ခတ်ရှိခဲ့ပါတယ်။
<< စိတ်ဖိစီးမှု စွဲ >>